अब शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम, फोन र इन्टरनेटको पैसापनि नलाग्ने !
सोमबार २२ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले अब शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम दिने भएको छ । टेलिकमले ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजना अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरण जारी राखेको हो । कोरोना महामारीका समयमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन जारी राख्न टेलिकमले सिमकार्ड उपलब्ध गराइरहेको हो ।
टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले सिममार्फत शिक्षा मन्त्रालयको कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यसामग्री रहेको वेबसाइट चलाउन ५ जिबी डाटा र एकैपटक धेरै सन्देश अर्थात् बल्क एसएमएससमेत पठाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समुहमा आवद्ध सबै विद्यार्थी र शिक्षकले एकआपसमा असीमित कुराकानी गर्न समेत सुबिधा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त सुविधा प्रयोग गरेवापत मासिक रुपले लाग्ने शुल्क ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ अनुसार स्थानीय निकायमार्फत सरकारले व्यहोर्ने छ । रु ९९ बराबरको शुल्कमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयका हरेक विद्यार्थी र शिक्षकले एक थान निःशुल्क पाठशाला सिमकार्ड लिन सक्नेछन् ।
कसरी सहभागी हुने
टेलिकमले ल्याएको ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजनामा आबद्ध हुन कम्पनीको जिएसएम वा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्दछ । विद्यार्थी र शिक्षकले चाहेमा पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिएको प्रिपेड सिमकार्डलाई योजनामा आबद्ध गर्न सकिने जनाइएको छ । प्रिपेड सिमकार्ड नहुनेका लागि निःशुल्क रुपमा नयाँ प्रिपेड सिमकार्ड लिन सक्नेछन् ।
सिमकार्ड लिन शिक्षक तथा विद्यार्थीले कम्पनीले निर्धारण गरेको प्रिपेड मोबाइलको आवेदन फाराम भरी सम्बन्धित सार्वजनिक विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी आवेदन फारामको साथमा विद्यार्थीको परिचयपत्रको प्रतिलिपी, विद्यार्थीको नागरिकताको प्रतिलिपि वा नागरिकता नबनेको भएमा अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुका साथै आवेदन फारामको निर्धारित स्थानमा एक प्रति फोटो टाँसिएको हुनुपर्नेछ । विद्यार्थीले सिमकार्ड उनीहरुकै वा अभिभावकको नाममा समेत लिन सक्नेछन् ।
विद्यालयले उक्त योजनामा आवद्ध हुने सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाइल नम्बर र नामसहित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नजिकको टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्क गरी सो वापत लाग्ने शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दछ । उक्त अवधि सकिए पनि निःशुल्क रुपमा प्रयोग गरिएको सिम अन्य प्रयोगकर्ता सरह नै निरन्तर प्रयोग गर्न सकिने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो । रासस
योपनि पढ्नुहोस् ।
दाजु-भाईले दिदि-बहिनी नै विवाह गरेर घर ल्याए, रातको १ बजे जे भयो थाहा पाउँने जो कोही चकित !
पक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित !
मास्क नलगाउँदा प्रहरीले १६ सय तिराएपछि बिरोध गर्ने श्रीमतीलाई श्रीमानले पुलिसकै अगाडी थ’प्पड लगाए
फेसबुकमा समाचार सेयर गरे वापत अब पैसा पाउने, फेसबुकले छुट्यायो डलर
शाओमी नेपालको नयाँआधिकारिक सर्भिस सेन्टर शुरु
वर्ल्डलिंकको “तहल्का” इन्टरनेट योजना
चीनमा अब विद्यार्थीले मोबाइल फोन बोक्न नपाउने
अब नेपालका यी ३१ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट
हातहातमै सरकारी सेवा दिने नागरिक एप एक लाख ६२ हजार ५०० ले डाउनलोड गरे
जनताको सुविधाका लागि सरकारले ल्यायो ‘नागरिक एप’
नेपालको पहिलो सर्ट भिडियो हेर्न पाइने एप टिकदीप अब तपाईको मोबाइलमा
रिचार्ज कार्डमा मनपरी मूल्य, १०० को कार्डका लागि १२० तिर्न बाध्य ग्राहक
नेपाल टेलिकमले शुक्रबारदेखि टिभी सञ्चालनमा ल्याउने
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौताको विषयमा नेपाल टेलिकमसँग जवाफ मागियो
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौता सम्पन्न
टेलिकमले ल्याएको एफटीटीएच इन्टरनेट सेवाको नयाँ अफर यसरी एक्टिभ गर्नुहोस्
बाथटबमा यस्ता गल्तीले मोबाइलबाटै हुन्छ मृत्यु, २४ वर्षीया युवतीको मृत्युपछि चेतवानी जारी